ခင်မင်းဇော်: အားကျမိတဲ့ အမျိုးသမီး ၂ ယောက်
Posted by ခင်မင်းဇော် at 4:47 AM
အမရေ ...တော်လွန်တဲ့ မိန်းမတွေကြောင့် ဒူကဘာတို့ နဲနဲများ အနေကျုံ့လာ သလားလို့ပါ၊ ဂုဏ်ယူပါတယ် ..လွတ်မြောက် လွန်မြောက်ချင်လှပြီ။
အမ- အဲဒီပြင်သစ်က..လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးကို..သတိထားမိနေတာကြာပီ..လူ့အခွင့်အရေးအတွက်..၀န်ကြီးဌါန သပ်သပ်တခုရှိနေတာရယ်..ငယ်တာရယ်..ဒေသခံပြင်သစ်အနွယ်မဟုတ်တာရယ်ကြောင့်။
ခု..အမ ထပ်ပြောပြမှ ပိုသိသွားတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင် စောင့်ကြည့်နေမယ်။
တော်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ နေရာရလာတာဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့်လာမှုကိုပြတာလို့ ထင်တာပဲ။ ပြီးတော့ အမျိုးသမီးတွေ ကြိုးစားဖို့ ပိုအားရှိလာရတယ်.. Good post !!
ညတုန်းက ဒီဗွီဘီမှာ စောင့်ကြည့်တာ
I think she is justashow case minority for Sarko's right wing cabinet. France and French are not in love with her suburbern ghettos and alien neighborhood. It is not judging the Parisians in downtown Paris or North and West Africans in those problematic areas who normally burn tires, live on welfare, committ some crimes, do not pay tax, live in public housing, living on other people's contribution. But we should see beyond those romantic and simplistic face values.